Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Spain » Maxkamadda Isbaanishka ayaa diiday Waajibaadka Gudbinta COVID -ga ee Caweyska
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Wararka Dowladda • News • Waajib ah • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Maxkamadda Isbaanishka ayaa diiday Waajibaadka Maaskaro ee Caweyska
Maxkamadda sare ee Andalusia waxay u aragtaa inay khasab ku tahay in baasaboorada caafimaadka la booqdo goobaha lagu caweeyo ee habeenkii si ay u noqoto takoor iyo xadgudub ku ah xuquuqda gaarka ah ee muwaadiniinta.
Qorsheyso inaad 'baasaboorada COVID-19' ka dhigto mid khasab ah inaad booqato goobaha lagu caweeyo ee maxkamaddu toogatay.
Qorshahaas oo aan wanaagsanayn ayaa lagu dhawaaqay Isniintii.
Qorshuhu wuxuu u baahan doonaa Shahaadada COVID Digital EU, tijaabo PCR oo taban, ama baaritaan antibody diidmo ah si loo booqdo goob kasta oo nolosha habeenkii ah ee Andalusia.
Maxkamadda Sare ee Caddaaladda Andalusia (TSJA) ayaa diiday qorshe muran dhaliyay oo doonayay in baasaboorada COVID-19 laga dhigo khasab inay booqdaan dhammaan goobaha lagu caweeyo ee habeenkii.
Maxkamadda sare ee gobolka xeebta koonfureed ee Spain ayaa xukuntay in ay ka soo horjeedo soo jeedintaas oo ay sabaysay xukuumadda Andalusia horraantii toddobaadkan. Samaynta baasaboorada caafimaadka ee khasabka ah in la booqdo goobaha nolosha habeenkii ee gudaha waxaa loo arkay inay tahay takoor iyo ku xadgudub xuquuqda asturnaanta muwaadiniinta.
Qorshahan xumaaday waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha dowlad-goboleedka, Juanma Moreno, oo dib ugu soo laabtay Isniintii. Sida laga soo xigtay Moreno, Shahaadada COVID Digital Digital, baaritaanka PCR ee taban, ama tijaabada antibody -ka xun ayaa laga rabaa inay booqdaan goob kasta oo nolosha habeenkii ah ee Andalusia.
In kasta oo qiyaasta markii hore la filayay in la dhaqangeliyo isla Khamiista, haddana waxaa la hakiyay maalin uun ka dib markii lagu dhawaaqay bilowgii. Qodobka waxaa loo gudbiyay dib -u -eegis TSJA, si loo helo “amniga sharciga ugu sarreeya” ka hor inta aan la dhaqan gelin, sida uu sheegay Elias Bendodo, oo ah kaaliye sare oo madaxweynaha ah. Xukunka dambiga ah ee maxkamaddu wuxuu ka dhigan yahay inuusan dhaqan geli doonin gabi ahaanba.
Intii uu socday masiibada, Spain waxay diiwaangelisay wadar ahaan 4.57 milyan oo kiis oo ah Covid-19 iyo ku dhawaad ​​82,000 oo dhimasho ah Jimcihii. Si kastaba ha noqotee, heerarka caabuqa ayaa hoos u dhacaya iyadoo waddanku u muuqdo inuu ka gudbay meeshii ugu sarraysay ee kala duwanaanshaha Delta ee sii faafa.
Bishii la soo dhaafay, Maxkamadda Dastuuriga ee Spain ayaa xukuntay in amarka xiritaanka adag - oo ay soo saartay dowladda dhexe intii lagu jiray mawjaddii ugu horreysay ee masiibada ee 2020 - sidoo kale uu ahaa mid aan dastuuri ahayn.